LEWIS GEORGE IYO MADAX KALE OO KA SOCDA UNICEF OO BOOQDAY G/SAXIL GAAR AHAN BERBERA | Toggaherer's Weblog
URUR SIYAASADEED CUSUB OO LAGAGA DHAWAAQAY LAASCAANOOD DHAWANATAN
Berbera 25 Feb 2009 (THN)
Wafti ka socda hayada qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF oo iskug jira madaxda xafiisyada UNICEF ee New York ,Nairobi , iyo magaalada Hargaysa ayaa kormeer ku soo maray mashaariicda dhinaca biyaha ee ay hayadu ka wado gobolka Saxil .
Warftigaas oo ka koobnaa lix xubnoo uu hor kacaayey Lewis George oo ah madaxada mashaariicda degdega ah ee UNISEF oo isagu ka yimid dhinacaas New York ee dalka Maraykanka iyo xubno kale oo ka kala yimid Nairobi iyo Hargaysa xafiisyada ay ku leedahay hayadaasi.
Waftigan ayaa ku tilmaamay booqashadoodaasi mid ay ku kormeerayaan mashaariicda ay ka fuliyaan gobolak saaxil oo ay u wayn yihiin mashruuca biyaha ee Berbera iyo dhinca caafimaadka, waxbarashada iyo biyaha. Waxaanay soo eegeen iyaga oo ay horkacayaan badhasaabka gobolka Saaxil Maxamed Cabdilaahi ,Mayorka Bebera Cabdale Maxamed Carab iyo maareeyaha wakaalada biyaha Eng Abdi Xasan .
Goobaha ay kormeerka ku sameyeen ayaa ka mid ah ceelasha ay dayac tirka ku sameeyeen ee ceelasha Dubaar ee biyahoodu systemka qulqulka ku yimaadaan magaalada Berbera.
Waxaanay halakasi warbixino kaga dhegaysteen mayorka magaalada Bebera Cabdale Maxamed Carab iyo mareeyaha wakaalada biyaha Eng Abdi Xasan iyo qaybo ka mid ah ururada bulshada waxaanay dhamaantoodba UNISEF wax qabadkooda waxaana sido kale madaxdii kala duwanayd ee halkaasi maraysay ee ka kala socday hayada UNICEF ay balan qaadeen in ay sii wadayaan horumarinta mashaariicda ee Gobolkani.